Ukuphononongwa kwe-iPhone SE, ii-intshi ezine ezinamandla zeApple | Iindaba zeGajethi
Ukuphononongwa kwe-iPhone SE, ii-intshi ezine ezinamandla ze-Apple
Iintshi ezine azibonakali ngathi zifuna ukuphuma kwisitayile, ubuncinci okoko i-Apple igqibe kwelokuba. Kwaye nge-21 ka-Matshi intetho esemthethweni ye iPhone SE, isixhobo esinqandiweyo, kwinto yanamhlanje ethathwa njenge "encinci", kunye noyilo olwaziwayo lwee-iPhone 5s kodwa zikhatshwa bubuchwephesha bamva nje obuphunyezwe kwifowuni efanelekileyo iApple ekhoyo emarikeni, oko kukuthi, umzimba I-iPhone 5s, umphefumlo we-iPhone 6s. KwiActualidad Gadget asifuni ukuba uphoswe nayiphina itekhnoloji ethe yasungulwa kwimarike, yiyo loo nto Sikuzisa uhlalutyo lwe-iPhone SE, eyona iPhone ingabizi kakhulu eyakhe yaziswa nguApple.
I-Apple ayilahlekanga zizakhono zayo zentengiso, kwaye njengoko isenza ngaso sonke isixhobo, i-iPhone SE nayo ine-tagline yayo, ethi ngeli xesha ifundwe 'Umkhulu kangakanani, umncinci… ». Ngeli xesha siza kuhlalutya i-iPhone SE kuhlobo lweRose Gold, kuba kude kube ngoku ibingumbala ongazange ubonwe kwi-5s chassis ye-iPhone, kwaye kufuneka sithi ngokuqinisekileyo ibonakala ilungile kubathandi bolu hlobo lombala we-pastel oqaqambileyo. Kulabo abasathandabuzi ukuphatha izikrini ezinkulu esiqhele ukuzisebenzisa ezipokothweni zabo, i-iPhone SE iba sisiphelo esinokuqwalaselwa, ngenxa yexabiso kunye namandla, kuba njengoko besitshilo, esi sixhobo sesona sitshiphu siboniswe ukuza kuthi ga ngoku Inkampani yaseCupertino.
1 Uyilo oluhleli nathi ukusukela nge2012
2 Ingcuka eyambethe ufele lwegusha, isixhobo sesikhombisi
3 Isoftware yamva nje, enazo zonke izinto ezixhaswayo
4 Ikhamera ekuphakameni kweyona nto ibhetele
5 Iziqulatho zebhokisi, amaxabiso kunye nokufumaneka
Uyilo oluhleli nathi ukusukela nge2012
Uyilo oluye lwaba ngamanqaku angalunganga kunye nenqaku eliqinisekileyo ngokuxhomekeke kubani kwaye ujonga njani. Kwabaninzi, inyani yokusebenzisa kwakhona imodeli ka-2012 ibikukutyibilika kwinqanaba lika-Apple, Ukusuka apho inyathelo eliya phambili lisoloko lilindelekile ukuya kuthi ga kweli sebe. Nangona kunjalo, uninzi lolona loyilo luphumeleleyo ukuza kuthi ga ngoku i-Apple eyakha yasebenzisa kwifowuni, ngokuqinisekileyo eye yaqinisekisa abasebenzisi abaluthandayo olu hlobo lweskimu kakhulu. Kwelinye icala, ukusetyenziswa kwakhona koyilo kuvumele inkampani ukuba yehlise iindleko, into ebonakaliswe ngokucacileyo kwixabiso lesixhobo, esingabizi nje kuphela ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ikwayenye yezona ndawo ezisezantsi ezisezantsi izibonelelo abazizisayo kwinkampani.
Ngobude be-12,38 cm, buhamba kunye nobubanzi be-5,86 cm kunye nobukhulu be-0,76mm, imilinganiselo efanayo negama layo, ii-iPhone 5s, nangona ubunzima butshintshiwe kancinane, ngeli thuba I-113 gram, Igram ngaphezulu kwe-iPhone 5s, imodeli apho iboleka uyilo lonke. Utshintsho oluncinci kwinqanaba lolwakhiwo olufana nokufakwa kwegama lesibizo "SE" phantsi kophawu "iPhone" phantse alunamsebenzi. Singaliqukumbela eli candelo ngokuthi i-iPhone SE ngokuyintloko i-iPhone 5s ngokubhekisele ngaphandle, nantsi iApple ayifuni ukwenza konke konke.
Nangona kunjalo, ukuqaqamba kwezinto zentsimbi kunye nangasemva kunikezelwe kwi-eriyali kuguqulwe kancinane, kwaye iintsimbi zibonisa umbala ohambelana ngakumbi, ekugqibeleni esinokuthi siqwalasele i-matte, njengaleyo yangasemva, iindawo ezimbini ezimhlophe okanye ezimnyama kuxhomekeke kumbala wesixhobo esele sithathe umbala oqwalaselwe njengematte. Umphambili, nokuba sikhetha ntoni, usafana ngokugqibeleleyo naleyo ye-iPhone 5s. Ngokumalunga noluhlu lwemibala, sifumana ukongezwa ngaphaya kotshintsho oluncinci kwitoni, umbala owenziwe ngu-Apple ukuba ufike kwimfashini ufikelele kwii-intshi ezine, esithetha ngazo Rose igolide, le golide / ipinki iyabetha phakathi kweethoni ezimhlophe ze-iPhone SE, ehamba ne Spacial Grey, Isilivere emhlophe kunye neChampagne Gold. Ekuboneni kuqala iRose Gold iya kuba yenye yezinto ezimbalwa ezinokuchongwa njenge-iPhone SE.
Nangona kunjalo, ithoni epinki ihlala isenza sibhidanise izinto zentsimbi kunye neplastiki kuxhomekeke kwiimeko, kuba bathathe iintlungu ezinkulu ukubandakanya iithoni zematte ezinokunika imvakalelo yeplastiki. Nangona kunjalo, ukuchukumisa kuhlala kufana nokwandulelayo, indibaniselwano yealuminiyam kunye neglasi ehambelana ngokugqibeleleyo, kunye nemiphetho enobundlongondlongo, ethi, nangona ingeyiyo eyona ergonomic, ingenangxaki ngenxa yesayizi "encinci" yesixhobo ekuthethwa ngaso.
Ingcuka eyambethe ufele lwegusha, isixhobo sesikhombisi
U-Apple wayefuna ukuthulisa amathandabuzo avele phambi kwesi sixhobo, kwingqondo yomntu wonke yayiyi-iPhone 5c, loo rehash yokuthetha eyabiza iBhodi yaBalawuli ngaphezulu kokungoneliseki. Kungenxa yoko le nto egqibe ekubeni angayenzi impazamo efanayo kwaye asibonise ngezixhobo zentsimbi zamva nje, njengelifa ikakhulu iindawo ze-iPhone 6s, eli licandelo elipheleleyo:
Iprosesa ye-A9 enobugcisa be-64 Bit
I-2 GB yememori IDRAM ye-LLDDR4
Ukuqhubela phambili kwe-LTE kunye neBluetooth 4.2
Wi-Fi Ifowuni ye-Wi? Fi 802.11a / b / g / n / ac
Isazisi sokuqala seTouch
Njengoko sibona kuluhlu lwehardware, ayinayo itekhnoloji ye-3D Touch ekhutshwe kwii-iPhone 6s, ukuzithethelela iApple ibhekisele kwimicimbi yobungakanani, nangona kunjalo, i-chip yayo yoqhakamshelwano lwe-Intel iya kuvumela isantya sokuhambisa ukuya kuthi ga kwi-300 Mbps. wenzakele ukuyifaka okanye ukuyiguqula. Iscreen se-4-intshi sinesisombululo seI-1.136 nge-640 pixels, kwii-pixels ezingama-326 nge-intshi nganye ngokufanayo ngokufanayo ne-iPhone 5s.
Ukugcinwa mhlawumbi yenye yeendawo eziphoxayo, uluhlu lokufaka luqala kwi-16 GB, alunangqondo kwaphela phambi kwekhamera esiyifumana ngokomzekelo. Inyathelo elilandelayo kukuya kuma-64 GB, ushiye i-32 GB kwaye ngaphandle kokukhetha indawo yokugcina enkulu. Ngokubhekisele kwibhetri, 1.642 mah Ngokutsho kohlalutyo lwamva nje, bavelisa phakathi kwe-10 kunye ne-20 yepesenti ngaphezulu kweetheminali ezinje nge-iPhone 6s kunye ne-Samsung Galaxy S7.
Isoftware yamva nje, enazo zonke izinto ezixhaswayo
Ewe, iApple ayifakwanga kuphela iihardware ze-iPhone 6s ukusibeka kwibhendi ngokwamandla, kuba oku kuye kwahamba ne-iPhone SE yokuhambelana nazo zonke izinto ezinqabileyo kwinqanaba lesoftware ezibandakanya izixhobo zokugqibela. I-2GB yememori ye-RAM ikuvumela ukuba usebenze zonke ezi zinto zintsha, eyokuqala yile Iifayile eziPhila, Iifoto ezikhethekileyo zeApple eza ebomini njenge-GIF ye-animated kwaye ikhatshwa sisandi iyahambelana ne-iPhone SE, hayi umzekelo kwi-iPhone 6, isixhobo esixabisa phantse i-euro engamakhulu amabini ngaphezulu kwaye sisathengiswa. Inkqubo ye- I-Retina Flash Kukukhanya okulingisiweyo kunye nokuqaqamba kwescreen esivumela ukuba sithathe "ii-selfie" kwiimeko eziphantsi zokubonakala kwaye zibandakanyiwe kwi-iPhone SE.
Nangona kunjalo, mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ngu «Molo Siri«, Umsebenzi wokugcina umncedisi we-Apple osoloko ephaphile uyafumaneka ngokupheleleyo, iprosesa yamandla asezantsi e-M9 yiyo elawula lo msebenzi, ongachaphazeliyo ukusetyenziswa kwebhetri ye-iPhone kwaphela kwaye ivumela ukuba sonwabe. Kwicandelo lomzobo, i-RAM kunye neprosesa yesixhobo kwakhona isivumele ukuba sonwabele imiboniso yamva nje kwi-Unreal Injini ehamba kunye netekhnoloji ye-METAL ethe yazisa kakhulu isoftware ngokwemidlalo yevidiyo kwiqonga le-iOS.
Ikhamera ekuphakameni kweyona nto ibhetele
Ikhamera yangemva nayo izuzwe njengelifa kwii-iPhone 6s, nge Ikhamera ye-12MP iSight eneepikseli mncinci kakhulu, Ikhatshwa kukukhanya kweTone yeNyaniso yesiqhelo kunye nokuvula okungaphezulu kwe-2,2. Ikhamera entsha ye-Apple iyakwazi ukurekhoda ividiyo kwisisombululo I-4K kwii-FPS ezingama-30, Isisombululo se-1080p kwi-30 okanye kwi-60 ye-FPS kunye ne-1080p yokuhamba kancinci kwii-FPS ezili-120 ukongeza kwi-720p kwi-FPS ezingama-240.
Kwelinye icala sifumana ikhamera yangaphambili, inqaku elibi ngokwenene, ngelixa ezinye iimveliso zijolise kwii-selfies kubonakala ngathi iApple iyazinika ezilahlekileyo. Ikhamera yeFaceTime HD ene-1,2 Mpx kwaye indawo ekugxilwe kuyo ingu-2,4, iyazikhusela, kodwa ikwindawo ephambili kwezinye iikhamera kwintengiso. Ukongeza, ithembisa ukurekhoda ividiyo kwi-720p, nangona umgangatho ngokucacileyo usezantsi.
Iziqulatho zebhokisi, amaxabiso kunye nokufumaneka
Kwibhokisi abangafunanga ukuyila ukusukela ngeCupertino, sifumana ii-EarPods kunye nebhokisi yabo ye-polycarbonate eya kusivumela ukuba sigcine ngokulula sithutha ii-headphone. Itshaja iguqulelwe kwingingqi apho sithengile kunye nentambo yombane ye-1,2 yemitha. Njengakuzo zonke iimveliso zeApple, imvulophu yokufundisa ihamba kunye neevinyl ezimbalwa ezinophawu lwentengiso kunye nesitshixo sokuvula itanki yeNanoSIM.
I-iPhone SE yile iyafumaneka eSpain ukusukela nge-6 ka-Epreli odlulileyoNangona kunjalo, okwangoku isitokhwe sigcwele kwaye ukuhanjiswa kucwangciselwe inyanga kaMeyi. Ngeli xesha ithuba lesibini kukuya kwiVenkile yeApple ekufutshane kwaye ujonge ukubakho kwayo kwindawo. Iinkampani zomnxeba kungekudala zizothatha isitokhwe kwaye abathengisi kwakhona abanjengoRosselliMac kunye no-El Corte Inglés sele benalo ithuba lokubhukisha ukuze bafumane elakho.
I-iPhone SE-16 GB- € 489
I-iPhone SE-64 GB-589
IPhone SE I-Rose Gold
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphononongwa kwe-iPhone SE, ii-intshi ezine ezinamandla ze-Apple
I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel kwiindawo eziphakamileyo zokufunda ngokwedijithali
I-Meizu Pro 6 sele isemthethweni, kwaye irhamncwa lokwenyani elinoyilo oluhle kakhulu